Maamulka Puntland ayaa ku dhawaaqay inuu xiriirkii u jaray dowlada federaalka Somalia ka dib narkii ay ka caroodeen heshiis ay garwadeen kaa aheyd dowlada Somalia oo maamul federaal ah loogu dhisayo gobolada Mudug iyo Galgaduud.
Go’aankaan ayaa ka dambeeyay shir deg deg ah oo shalay galab xarunta madaxtooyada ay ku yeesheen golaha wasiirada Puntland oo uu shir gudoominayay madaxweyne Gaas.
War-saxafaadeed kasoo baxay shirkaan oo uu saxaafada u aqriyay madaxweynaha ayaa wuxuu sheegay in dowladda Puntland ay gabi ahaanba xiriirkii u jartay dowladda federalka Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa sheegay inay kasoo horjeedaan heshiiska maamulka u sameynta gobolada Mudug iyo Galgaduud oo uu ku sifeeyay inuu kasoo horjeedo dastuurka KMG ah ee Soomaaliya isla markaana uu yahay xad gudub lagu sameynayo dhul ka mid ah Puntland.
Wuxuu ku eedeeyay madaxda dowladda federalka Soomaaliya inay horseed ka noqdaan heshiis ka hor imaanaya dastuurka dalka iyo nidaamka federaalka.
Wuxuu sidoo kale madaxweynuhu ugu yeeray Caasho Geelle Diiriye oo ah gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka inay timaado Puntland, iyadoo sidoo kale Puntland ay u yeeratay xildhibaanada ku metelaya baarlamanka Somalia.
Puntland ayaa sheegtay inay ka xun tahay in beesha caalamku goob joog ka ahaadaan qorshihii Muqdisho shalay lagu gaaray, waxayna sheegtay wixii ka yimaada oo dhibaato ah inay dusha saaran doonto xukuumada Soomaaliya.
Madaxda dowladda federaalka ayaa soo bandhigay heshiis ay ku tilmaameen in maamul heer federaal ah loogu dhisayo gobolada Mudug iyo Galgaduud, mana ahan markii ugu horeysay ee maamulka Puntland uu xiriirka u jaro dowlada Somalia.